အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးမျှဝေပါ။ Camino de Santiago
မော်နီကာဆန် | | ယဉျကြေးမှု, ဆွေမျိုး
El စန်တီယာဂိုလမ်း အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သူတို့၏ဘ ၀ တွင်လူတိုင်းသွားရမည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုခင်းများကိုခံစားကြည့်ပါ၊ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ပြုလုပ်သောဆွေးနွေးပွဲများ၊ လမ်းခရီးတစ်လျှောက်သင်လမ်းလျှောက်သောအခါသင်ရှူနေသောအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထိန်းသိမ်းထားသောရှုခင်းများကိုလျှောက်လှမ်းခြင်း၏ရိုးရှင်းသည့်အချက်ကိုခံစားပါ။
1 Camino de Santiago ၏သမိုင်း
3 Camino de Santiago: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း
4 သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုဝေမျှ။ ကြီးစွာသောဆုကိုရယူပါ
Camino de Santiago ၏သမိုင်း
Camino de Santiago သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအကြီးဆုံးသောဝိညာဉ်ရေးလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြို့တော် Santiago de Compostela သည်ရိုးရာအစဉ်အလာအရယေရှုခရစ်၏တမန်တော် ၁၂ ပါးအနက်မှတစ် ဦး ၏သင်္ချိုင်းဖြစ်သည်။ စန်တီယာဂို.
သူသည်အိုင်ဘီယံကျွန်းဆွယ်တစ်လျှောက်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဟောပြောခဲ့သည်ဟုဆိုထားသည်။ ခဏကြာတော့ဂျေရုဆလင်မြို့ကိုသူသွားပြီးနောက်ဆုံးမှာသူသေသွားတယ်။ သူ၏တပည့်များသည်ကျောက်တုံးပေါ်တွင်သိုလှောင်ထားသည့်သူ၏ရုပ်ကြွင်းများကိုအံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ဂါလိလဲပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ၉ ရာစုတွင် Pelayo အမည်ရှိဘုန်းကြီးတစ်ပါးသည်သူ၏သင်္ချိုင်းဂူကိုလူသိများသောနေရာတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် Stellae ကျောင်းပရဝုဏ်, Compostela ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ ဤမွို့၌ပထမဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံး၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်လာသည်။
နောက်ရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းဘုရားဖူးများသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံ Arles၊ Le Puy၊ Orleans နှင့် Vezelay မှ ဦး ဆောင်သည့်လမ်းကြောင်းများကိုစတင်လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူက Roncesvalles နဲ့ Jaca ကနေလည်းခရီးထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒီနေ့လမ်းလျှောက်ချင်သူမည်သူမဆိုဖြတ်သန်းသွားမှာကိုသိသင့်သည် Navarra, Aragon, la Rioja, Castile နှင့် Leon, နောက်ဆုံးတော့ Galicia စန်တီယာဂိုကိုသွားဖို့ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်သောအလွန်ရှည်လျားသော်လည်းအဓိကအားဖြင့်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောလမ်းကြောင်းတစ်ခု။
သင်ရွေးချယ်သည့်အစကမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကိုဆက်တိုက်သယ်ဆောင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လမ်းလျှောက်ခြင်းထက်များစွာပိုလိမ့်မည်၊ သင်အလွန်အသုံးဝင်လျှင်ပင်သင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လိမ့်မည်။ ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်တာ။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကျောပိုးအိတ်ကိုထုပ်ပိုးလိုက်တဲ့အခါ၊ ဒီအရာတွေကိုမချန်ထားနိုင်ဘူး။
ခရီးသည်ပခုံးပိုးအိတ်ဖြေ - အဆင်ပြေဖို့လိုတယ်။ အားကစားသမားများအတွက်အဝတ်အစားနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုသူတို့ရောင်းချသည့်စတိုးဆိုင်များတွင်သင့်အားအလေးချိန်ကိုအထူးအိတ်ကပ်ထဲ၌ဖြန့်ဝေပေးမည့်မော်ဒယ်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်အလေးချိန်၏ ၁၀% ထက်မပိုသောကြောင့်သင်ပြည့်ဝသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်အလေးချိန်အရေးကြီးသည်။
DNI၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဘဏ်ကတ်။ ပြီးတော့ငွေအချို့ကိုလည်းမမေ့ပါနှင့်။
Calzadoလုပ်ဖို့အထူး တောင်တက်။ ဒါကိုအားကစားဆိုင်တွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ အဆင်မပြေမှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အနေဖြင့်အနည်းဆုံး ၂ လကြို။ အသုံးပြုရမည်။
တောင်ဘောင်းဘီသူတို့အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုရန်သင့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်
အိပ်အိတ်အကယ်၍ သင်သည် Camino de Santiago သို့ဆောင်းရာသီတွင်သွားမည်ဆိုပါကသင်နှင့်အတူယူရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
ယုံကြည်ကိုးစား။ ။ မင်းကိုဘုရားဖူးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတဲ့စာရွက်စာတမ်းတခုဖြစ်တယ်။ တည်းခိုခန်းအများစုတွင်အိပ်ရန်၎င်းကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ပြီးတော့ငါတို့အားလုံး Camino de Santiago ကိုဆက်ခံစားနိုင်အောင်ပျောက်ဆုံးမသွားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု။ ဟုတ်တယ်၊ ငါသိတယ်၊ အဲဒါဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့သဘာဝကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့လှပမှုကိုဆက်ပြသနိုင်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် Ecoembes ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်»ဟုခေါ်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလမ်းကြောင်း။ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလမ်းကြောင်း»ဘုရားဖူးများအနေဖြင့်ကွန်တိန်နာများရွေးချယ်ခြင်းစုဆောင်းခြင်း၊ ပလတ်စတစ်များ၊ သံဗူးများနှင့်အုတ်များကိုအဝါရောင်ကွန်တိန်နာများထဲသို့ပစ်ချခြင်း၊ ပြင်သစ်လမ်း၏အမိုးအကာများ၌နေရာချထားသည့်အပြာရောင်ကွန်တိန်နာအတွင်းရှိစက္ကူနှင့်ကတ်ထူပြားများအားချိတ်ဆက်နေသည်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံစိန့်ဂျင်းဒီပီယပ်ဒ်ဆိပ်ကမ်းသည်စန်တီယာဂိုဒီကာစီလီယာယိုလီယွန်နှင့်ဂါလီစီယာတို့နှင့်အတူ။
Camino de Santiago: ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနည်းလမ်း
Camino ကိုလုပ်တဲ့သူတိုင်းကပုံပြင်တွေဝေမျှရတာဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုတာသိတယ်။ သူတို့ဆီကနေသင်ခန်းစာအများကြီးယူနိူင်တယ်၊ အဲဒါကိုသတိမပြုမိဘဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်လူတွေဟာကြီးထွားလာတယ်။ ၎င်းကိုအများဆုံးမျှဝေသည့်နေရာသည်သင်အနားယူရန်နှင့်စိတ်အေးလက်အေးစကားပြောနိုင်မည့်အမိုးအကာများ၌ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုကူညီရန်နှင့်ဂရုစိုက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Ecoembes မှသင်ရရှိနိုင်သောထုပ်ပိုးမှုကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း။ ဒါကမသာပေမယ့်သင်လည်းယူနိုင်ပါတယ် လက်ဆောင်ကိရိယာအစုံ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ lanyer နှင့်အဖုံးတို့ပါဝင်ပြီး ၄ င်းကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်စိုစွတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ဒါတွေအားလုံးကမင်းအတွက်အသေးအဖွဲလို့ထင်ရရင် Castilla y Leónနဲ့ Galicia ရှိ hostels တွေအကြောင်းသင်လိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစီမံကိန်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။
သင်၏ Camino de Santiago ၏ဓာတ်ပုံများကိုအခြားဘုရားဖူးများနှင့်မျှဝေလိုပါသလား။ အခု hashtag ကိုသုံးပြီးအလွယ်တကူလုပ်နိုင်ပါတယ် #EcoPeregrino နှင့်ပြည်နယ်ကနေတ ဦး တည်း စက်တင်ဘာ ၃၀ အထိတွစ်တာနှင့် Instagram တို့မှ (#Burgos, #Palencia, # León, # Acoruñaနှင့် #Lugo) အထိဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလည်းသူတို့ကိုစဉ်းစားနိုင်အောင်သင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ဆုံးသောရှုခင်းများကိုထည့်သွင်းရန်တိုက်တွန်းပါ။
ဒါ့အပြင်၎င်းသည်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် သူတို့အားအထူးထောင့်လူသိများစေ သင် Camino ကိုနှစ်သက်သောအချိန်တွင်သာတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်မည်သည့်လွဲချော်မှုမှမရှိသေးကြောင်းစစ်ဆေးရန်အတွက် Ecoembes ဓာတ်ပုံပြခန်းကိုမကြည့်ပါနှင့်။
နှင့်အညီ, ယခု, သင်၏ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဆုရှိသည်! ၎င်းတို့ကိုတင်ခြင်းဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော hahtags နှစ်ခုဖြင့် သင်တစ် ဦး ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါလိမ့်မယ် အဘယ်သူ၏ဆုသည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။ သင်နှင့်အဖော်တစ် ဦး သည်နံနက်စာဖြင့်တစ်ည၊ မနက်စာနှင့်ညစာသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တစ်ညသို့မဟုတ်နံနက်စာနှင့်အတူ ၂ ညသို့မဟုတ်နံနက်စာနှင့်ညစာနှင့်ကျန်းမာခြင်းလှုပ်ရှားမှု ၂ ည
ထို့ကြောင့် Camino de Santiago ၏ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေရန်သင်ဘာကိုစောင့်နေသနည်း။ 😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ဆွေမျိုး » အသက်ရှင်နေထိုင်ပြီးမျှဝေပါ။ Camino de Santiago
ငါရက်ပေါင်း ၃၀ သွားလိုတဲ့စပိန်အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေကိုသွားချင်တယ်။ အဲဒီမြို့တွေကိုငါမလည်ပတ်နိုင်ဘူး
Extremadura မသိသော Zafra မှတဆင့်လမ်းလျှောက်